1. Edhisheni nhau muna Ndira. Mazita ekuremekedza munhu wese | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Vechidiki Mabhuku, Novela, Romance novel
Goredzva, uye netariro zvirinani pane iyo yatichangosiya kumashure pakupedzisira. Izvo zvisingazoshaikwe zvichave kuverengerwa uye chikamu chakatorongwa kare nhau. Iko kunoenda kutanga kusarudzwa kwemazita evateereri vese. Ndiine vanyori vakaita saDolores Redondo kana Ledicia Costas, pakati pevamwe. Ngatitarisei. Ah uye Goredzva Rakanaka.
1 Muvakidzani waJesu - Toño Casado
2 Ropafadzo dzemutumwa - Dolores Redondo
3 Pamwe chete - Meghan Kurume
4 Nhema dzeMariposa Island - Jennifer Mathieu
5 Iwo mini-madoko - Ledicia Costas
Muvakidzani waJesu - Toño Akaroora
Vakaroora ndizvo mupristi, munyori uye mutungamiriri wehunyanzvi, uye ave nekubudirira kwakasimba mune ino mimhanzi chikamu nekutora chikamu mukuumbwa kweiyo firimu Kudanwa. Uye pamusoro pezvose zvekuratidzwa 33 Musical. Uku ndiko kuenda kwake kwekutanga kutora zvinyorwa aine imwe nyaya yedare rimwe chete raanotaura naro hupenyu nemashura aJesu nekubata kukuru.
Iye protagonist ndiye Damiana, muvakidzani ane makuhwa, anoshingaira kwehupenyu hwake hwese uye sinagoge remazuva ese, uyo anofungisisa nekushamisika kushamisika kwemukomana akaberekerwa muNazareta wavanodaidza kuti Jesuito, uyo ane munhu wese ari mumheremhere.
Ropafadzo dzemutumwa - Dolores Redondo
Shamwari mbiri dzisingaparadzanisike. Kurasikirwa kusingagamuchirwe. Hupenyu hunodzikira.
Nhoroondo yekutanga yaDolores Redondo Iyo inoburitswa sechinhu chitsva kune vateveri vayo. Uye iri mumutsara wenyaya dzehukama hurefu hunoshandurwa nekufamba kwenguva uye nemamiriro ezvinhu. Ichokwadi hachizonyadzisa iwo mafeni.
Set in Mitikiti, in 70s, verengai ushamwari hukuru iyo yakaumbwa pakati Pakutxa y Celeste, vasikana vaviri vane makore mashanu. Pakati pemitambo, kuomarara nekuipa, kusuwa kunoyambuka nzira yake uye a kufa kunorwadza anovaparadzanisa.
Es Celeste, mukuru protagonist wenyaya iyi, inozotambura a dambudziko izvo zvinokwevera kwakawanda kwehupenyu hwake, nemhedzisiro yakaipa kune iye nevaya vakamukomberedza.
Pamwe chete - Meghan Kurume
Ungatanga sei gore pasina imwe yekuda uye eroticism? Zvakanaka, Meghan Kurume ndomumwe wevanyori chakanyanya kubudirira uye chakanyanya kutengesa yemhando. Nemazita anodarika makumi maviri akaburitswa, pakati payo trilogy inomira Mambo, Mambokadzi uye Chido, munyori weAmerica uyu anotiunzira nyaya nyowani yerudo uye neshungu.
Nyora iyo Kat naDane, uyo akasangana makore maviri nehafu apfuura, apo aive kuzororo kuMexico neshamwari yake yepamwoyo, Benjie. Se vakadanana ndokuroora. Asi nguva yako muchato wave kuda kuparara uye Dane akagadzirira mamwe vacations mavanotarisira kugadzirisa zvinhu, kana vachigona. Asi rwendo irworwo rwekuyananisa ruchavatora nenzira yavasina kutarisira.
Manyepo eMariposa Island - Jennifer Mathieu
American, yakatsaurirwa kuna utapi venhau uye mudzidzisi weChirungu, pamwe nemunyori wemabhuku on and for vechidiki. Nhoroondo yake yekutanga ndeye Ndakakuudza nezvaAlice here?, uyezve munyori we Moxie.
Iyi nyowani nyowani yakaiswa mu Islane vakoma vaviri, one amai vanoshusha uye zvakawanda zvakavanzika zvemhuri. Izvo zvakavanzika uye nenjodzi inosanganisirwa nekuzvichengeta, pamusoro pekuita sarudzo kana rudo zvine simba uye zvinoparadza panguva imwechete izvo zvinogona kuve mumhuri.
Iwo madiki-madoko - Ledicia Costas
Ledicia Costas munyori wechiGalician ane degree muMutemo kubva kuYunivhesiti ye Vigo. Su yekutanga novel rakabudiswa, Unha nyeredzi handitengesi, akainyora achiri mudiki uye parizvino ari mumagazini yayo yechi17. Akakunda Mubairo weNyika weVana neVechidiki Zvinyorwa kubudikidza Scarlet fever. Asi yakagamuchira yakawanda yakawanda.
Con The Minimuertos inotanga muunganidzwa mutsva zvakare wakanangana nevadzidzi vadiki. Ine nyeredzi nevamwe vana vanobva mhiri kweguva, Vari kumirira vabereki vavo mune Imwe Nharaunda, nzvimbo yekupfuura kwavanogona kuita chero chavanoda.
Zvese zvinhu zvinochinja musi waanosvika cacrack, mwana anoda dzoka kunyika yavapenyu. Iwo Miniports anofanirwa kuenda kune yakakura kureba kuti akubatsire iwe. Ko mazano avo achadzosa Catacrak kuhupenyu here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » 1. Edhisheni nhau muna Ndira. Mazita ekuremekedza munhu wese
Kwakanaka kurudziro, ini ndakada ipfupiso, kunyanya iyo iri pa "La Vecina de Jesús".